2015-03-29 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​သင်​ကွန်​ပျူ​တာ​တစ်​လုံး​မှာ 100% ​လုပ်​ကိုင်​ခွင့် ​အ​ပြည့်​အ​ဝ​ရှိ​ရဲ့​လား??
​ကွန်​ပျူ​တာ ​တစ်​လုံး​မှာ ​ကျ​နော်​တို့ window ​တင်​ပြီး​က​တည်း​က ​စ​သုံး​ရ​တဲ့ User ​အ​ဆင့်​က Administrator (95%) unlimited ​သူ့​အောက်​မှာ​က​တော့ Standard User (50%) limited ​ပ​ထ​မ window ​စ​ပြီး​က​တည်း​က ​အ​သုံး​ပြု​ခွင့်​ရ​ရှိ​ထား​တဲ့ Admin ​အ​ဆင့်​ရှိ​တဲ့​သူ​ဟာ Standard User ​ကို ​ပုံ​စံ​အ​မျိုး​မျိုး​နဲ့ ​ကန့်​သတ်​ချက်​တွေ ​ထား​ပြီး​တော့ ​ထိန်း​ချုပ်​ထား​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ​ပြော​ရ​ရင် standard user ​ဟာ Administrator Laval ​အ​ဆင့်​ရဲ့ ​သတ်​မှတ်​ချက်​အောက်​မှာ​ဘဲ ​ရှင်​သန်​ရ​တဲ့​သူ​ပေါ့. Admin ​က ​မ​သုံး​စေ​ချင်​တာ​ကို​လည်း ​သူ့​မှာ ​အ​သုံး​ပြု​ခွင့် ​မ​ရ​ရှိ​ဘူး။ ​အ​ဆို​ပါ administrator ​အ​ဆင့်​ရှိ​တဲ့​သူ​ဟာ ​ကွန်​ပျူ​တာ ​တစ်​လုံး​မှာ ​အား​လုံး​လုပ်​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ​သူ​နဲ့​အ​ဆင့်​တူ​တဲ့ Administrator ​တွေ​ကို​လည်း ​ဖျက်​ချင်​ရင် ​ဖျက်​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ​အဲ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​သူ့​မှာ ​တစ်​ခု​တော့ ​လုပ်​ပိုင်​ခွင့် ​မ​ရှိ​ဘူး။ ​အဲ့​ဒါ​က ????? ​အဲ့​ဒီ့​အ​ကြောင့်​ကို ​မ​ရှင်း​ပြ​ခင် ​ကျ​နော် ​အ​လွယ်​ဆုံး ​တစ်​ခု​နဲ့ ​ဥ​ပ​မာ​ပေး​ပါ့​မယ်။ ​အဲ့​ဒီ့​ဥ​ပ​မာ​ကို ​နား​လည်​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​ခု ​ကျ​နော်​ပြော​ပြ​မှာ​ကို ​လုံး​ဝ​နား​လည်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​ကျ​နော်​တို့ wordpress , Joomla, Php Forum ​စ​တဲ့ ​ဆိုက်​တွေ​ကို ​လုပ်​တော့​မယ်​ဆို​ရင်. ​သတ်​မှတ်​တဲ့ ​အ​ဆင့်​ကို ၃ ​မျိုး​နဲ့​ပဲ ​ခွဲ​ပြ​ပါ့​မယ်။ ​အဲ့​ထက်​အ​ဆင့်​တွေ​များ​ပါ​တယ်။ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အား​လုံး​မြင်​နိုင်​အောင် ​ကျ​နော် ​သုံး​ဆင့်​ကို​ပဲ ​ခွဲ​ပြ​ပါ့​မယ်။ ​အ​ဆင့်(၁) ​ဝဘ်​ဆိုက်​ကို ​စ​တင်​အ​သက်​သွင်း​သူ (​တည်​ထောင်​သူ) ​ကို Creator ​အ​ဆင့်(၂) Creator ​က ​နေ ​သူ​နဲ့​လုပ်​ကိုင်​ခွင့် ​တန်း​တူ​ထား​ပေး​ထား​တဲ့​သူ​ကို Administrator ​အ​ဆင့်(၃) Creator ​နဲ့ Administrator ​ရဲ့ ​ထိန်း​ချုပ်​မှု့​အောက်​မှာ​ပဲ ​ရှိ​နေ​တဲ့​သူ​အား​လုံး​ကို user ​လို့​ပဲ ​အ​လွယ်​မှတ်​လိုက်​ပါ။ ​တ​ကယ်​တမ်း​ခွဲ​ထုတ်​မယ်​ဆို ​အ​ဆင့်​တွေ ​အ​များ​ကြီး​ခွဲ​ထုတ်​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​တော့ ​ကျ​နော်​ပြော​ချင်​တာ​က Admin ​အောက်​မှာ ​ရှိ​တဲ့​သူ​အား​လုံး​ကို User ​လို့​ပဲ ​ပေါင်း​မှတ်​ပေး​ပါ။ ​အဲ့​တော့ ​ကျ​နော်​တို့ ​ခု ​အ​ဆင့် ၃ ​ဆင့်​မှာ ​အ​ပေါ်​က (၂) ​ယောက်​သည် ​ရုတ်​တ​ရက်​ကြည့်​မယ်​ဆို ​တူ​ညီ​တယ်​လို့ ​ထင်​ရ​ပါ​တယ်။ ​ဘာ​လို့​လဲ​ဆို​ရင် ၂ ​ယောက်​စ​လုံး​က Administrator ​အ​ဆင့်​တွေ​ချည်း​ဖြစ်​နေ​လို့​ပါ။ ​လုပ်​ကိုင်​ခွင့်​တူ​ပါ​တယ်။ ​ဒါ​ပေ​မယ့် Creator ​ဟာ ​ဆိုက်​တစ်​ခု​မှာ ​တစ်​ယောက်​ပဲ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​အဲ့ Creator ​က​နေ ​သူ​နဲ့​တန်း​တူ​ရှိ​နေ​တဲ့ Administrator ​နဲ့ User ​အား​လုံး​ကို ​ထုတ်​ခွင့် ​ထိန်း​ချုပ်​ခွင့်​ကို ​အ​ပြည့်​အ​ဝ ​ရ​ရှိ​ထား​ပါ​တယ်။ ​သူ​ထည့်​ချင်​ထည့်​လို့​ရ​သ​လို ​ထုတ်​ချင်​လည်း ​ထုတ်​ခွင့်​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​ဒါ​ပေ​မယ့် Administrator ​က​တော့ ​သူ့​ကို ​ပြန်​ထုတ်​တာ​တို့ ​ဘာ​တို့ ​လုပ်​ခွင့်​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး။ ​ကဲ ​ဒီ​အ​ဆင့် ၃ ​ဆင့်​ကို ​နား​လည်​ပြီ​ဆို​ရင် ​ခု​န​က ​ကျ​နော်​တို့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ဖက်​ကို ​နည်း​နည်း​ပြန်​လှည့်​ရ​အောင်​ဗျာ .. ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ ​ကျ​နော်​တို့ ​စ​ပြီး​တော့ window ​တင်​ပြီး​ပြီး​ချင်​မှာ ​အ​သုံး​ပြု​ခွင့်​ရ​ထား​တာ​က ​အ​ဆင့်(၂) ​အ​ဆင့်​ရှိ​တဲ့ Administrator ​အ​ဆင့်​ကို​ပဲ ​ရ​ရှိ​ထား​တာ​ပါ။ ​ဒါ​ဆို​ရင် ​သူ့​အ​ထက်​က Creator ​အ​ဆင့်​ရှိ​တဲ့ ​အ​ကောင့်​က​ကော​လို့ ​မေး​စ​ရာ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​အ​ကောင့်​ကို Microsoft ​ဟာ window ​တင်​ပြီး​က​တည်း​က​ကို ​မ​သုံး​စေ​ချင်​လို့ ​ဖျောက်​ထား​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​တော့ ​အဲ့​ဒီ့ ​ပျောက်​နေ​တဲ့ Creator ​ကို ​ပေါ်​အောင် ​လုပ်​တဲ့​နည်း​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​နည်း​နဲ့​လုပ်​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ Microsoft ​က ​မ​သုံး ​စေ​ချင်​လို့ ​ဖျောက်​ထား​တဲ့ Creator ​အ​ဆင့်​ရှိ​တဲ့ Laval ​ဟာ ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​အဲ့​ပေါ်​လာ​တဲ့ ​အ​ဆင့်​က​မှ ​ကျ​နော်​တို့​အ​တွက် ​လုပ်​ကိုင်​ခွင့်​အ​ပြည့်​အ​ဝ ​ရ​ရှိ​ထား​တဲ့ ​အ​ဆင့်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​ဒီ့ creator ​ဟာ ​ခု​န​က ​ကျ​နော်​တို့ website ​နဲ့ ​ဥ​ပ​မာ​ရှင်း​ပြ​ထား​သ​လို​မျိုး Admin ​အား​လုံး​ရဲ့ ​အ​ကောင့်​တွေ​ကို ​ဖျက်​ထုတ်​ပစ်​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို ​သုံး​နေ​တဲ့ user ​အား​လုံး​ကို ​ဖျက်​ခွင့်​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အဲ့​ပေါ်​လာ​တဲ့ Creator(Admin) ​ကို​တော့ ​တစ်​ခြား Admin ​အ​ကောင့်​တွေ​နဲ့ ​ဖျက်​ခွင့် ​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး။ ​ပျောက်​နေ​တဲ့ Creator ​အ​ဆင့်​ကို ​ဖော်​ကြည့်​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​အောက်​က ​နည်း​နဲ့ ​ဖော်​ကြည့်​ပါ။ ​ဒီ​နေ့​ဟာ ​ကျ​နော် ​နည်း​ပ​ညာ​လော​က​ထဲ​ကို ​ပြန်​လည် ​ခြေ​ချ​တဲ့ ​နေ့​အ​ဖြစ် ​အ​မှတ်​တ​ရ ​ပို့စ်​ရေး​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ။ http://www.nyinaymin.org/2014/…/window-admin-password_9.html ​အဲ့​ပို့စ်​ထဲ​က ​နည်း​အ​တိုင်း ​လုပ်​ကြည့်​ရင် Admin ​အ​ကောင့်​အ​သစ်​တစ်​ခု ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​အဲ့​ဒီ့​အ​ကောင့်​က​မှ ​သင့်​ကို 100% ​အ​ပြည့်​အ​ဝ ​လုပ်​ကိုင်​ခွင့်​ပေး​ထား​တဲ့ ​အ​ကောင့်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​အား​လုံး​ကို ​ခင်​မင်​လေး​စား​လျှက် ​ညီ​နေ​မင်း(​နည်း​ပ​ညာ)
​သင်​ကွန်​ပျူ​တာ​တစ်​လုံး​မှာ 100% ​လုပ်​ကိုင်​ခွင...